थ्रीडी प्रिन्टिंगका प्रकारहरू: यस प्रविधिको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा नि: शुल्क हार्डवेयर
थ्रीडी प्रिन्टिंगका प्रकारहरू: यस प्रविधिको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा
को 3D प्रिन्टरहरू तिनीहरू सस्ता र अधिक लोकप्रिय हुँदैछन्, उनीहरूको साथ विभिन्न प्रकारका थ्रीडी प्रिन्टि।, र ती अधिक र अधिक अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोग भइरहेको छ। तिनीहरूले निर्माता, ईन्जिनियर, आर्किटेक्ट, इत्यादि को लागी तीन आयामी वस्तुहरु मात्र प्रिन्ट गर्न को लागी सेवा गर्दैन, अब उनीहरु मेडिकल अनुप्रयोगहरु, छापिएको घरहरु, औद्योगिक उत्पादन, मोटरस्पोर्टमा भाग बनाउनको लागी, छापिएको खाना, आदि को लागी जीवित कपडा प्रिन्ट गर्न सक्छन्।
यदि तपाईं विचार गर्दै हुनुहुन्छ थ्रीडी प्रिन्टर किन्नुहोस् घर वा तपाईंको व्यवसायको लागि, तपाईंलाई थ्रीडी प्रिन्टिंगका प्रकारहरू, भिन्नताहरू, इत्यादिहरू थाहा हुनुपर्दछ। थप रूपमा, तपाइँ तपाइँको नयाँ मुद्रण उपकरणहरू छनौट गर्न केहि कुञ्जीहरू पनि थाहा पाउनुहुनेछ।
1 कसरी 3D प्रिन्टर र थ्रीडी प्रिन्टिंगका प्रकारहरू छनौट गर्ने?
1.1 सामग्रीको प्रकार:
1.2 थ्रीडी प्रिन्टिंगका प्रकारहरू
1.3 मुद्रक सुविधा
कसरी 3D प्रिन्टर र थ्रीडी प्रिन्टिंगका प्रकारहरू छनौट गर्ने?
थ्रीडी प्रिन्टरिंगका सामग्रीहरू मात्रै नगर्नुहोस्, थ्रीडी प्रिन्टर छनौट गर्दा, अन्य धेरै प्यारामिटरहरूले पनि भूमिका खेल्छन्। राम्रो छनौट गर्नका लागि तपाईंले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ तीन आवश्यक प्रश्नहरू:
म कति खर्च गर्न सक्छु? तपाईले धेरै सस्तो प्रिन्टरहरू पाउनुहुनेछ, केहि सय यूरोबाट हजारौं यूरो खर्च हुने अरूलाई। सबै कुरा निर्भर हुन्छ कि तपाईं तिनीहरूलाई घर प्रयोगको लागि चाहनुहुन्छ वा अधिक व्यावसायिक प्रयोगको लागि।
केको लागि? अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न। मूल्यका लागि मात्र होईन, तर थ्रीडी प्रिन्टरको प्रदर्शनको लागि। उदाहरण को लागी, सानो घर को भाग बनाउन को लागी, तपाइँ यो सानो छ कि कम र कम गतिको साथ धेरै आपत्ति छैन। तर ठुलो मोडेलहरू बनाउन, तपाइँले3वा ″ भन्दा बढि प्रिन्टरहरूको खोजी गर्नुपर्नेछ।
मलाई कुन सामग्री चाहिन्छ? घरेलु भागहरूका लागि, सामान्य प्लास्टिक पोलिमरहरू जस्तै PLA, ABS, PETG, आदिको रूपमा, यो पर्याप्त हुनेछ। यसको सट्टामा, केहि व्यावसायिक / औद्योगिक अनुप्रयोगहरूमा कपडा, धातु, नायलन आदि प्रयोग हुन सक्छ।
भागहरूको आवश्यकतामा निर्भर गर्दै, तपाईंलाई एक वा अर्को प्रकारको छाप सामग्रीको आवश्यक पर्दछ। स्पष्ट रूपमा, होम प्रिन्टरहरू, जुन म केन्द्रित हुनेछु, सबै प्रकारका सामग्रीहरू स्वीकार गर्दैन। यो देखाईएको विशिष्टता मध्ये एक हो, र फिलामेन्टहरू जुन प्राय: समर्थन गर्दछ तिनीहरू छन्:
फिलामेन्टको रोल सामान्यतया सस्तो हुन्छन्, र विभिन्न लम्बाई र मोटाईहरूमा बेचिन्छ। उदाहरण को लागी, तिनीहरू १.1.75 मिमी बाट mm मिमी को लागी जान सक्दछन्। मोटाई मिल्नु पर्छ तपाइँको थ्रीडी प्रिन्टरको एक्सट्रुजन हेडले समर्थन गरेकोसँग।
ABS: एक्रिलोनिट्राइल बुटाएडीन स्टायरिन एक साधारण साधारण थर्माप्लास्टिक हो (उदाहरण: LEGO टुक्रा यस सामग्रीबाट बनेका हुन्छन्)। यो बायोडिग्रेडेबल छैन, तर यो कडा छ र ठोस संरचनाहरू निर्माण गर्न निश्चित कठोरता छ। योसँग ठूलो रासायनिक प्रतिरोध पनि छ, यो केवल एसीटोनसँग विघटन हुन्छ। यो घर्षण, र तापमानमा राम्रोसँग प्रतिरोध गर्दछ, तर यदि यो UV जोखिमको कारण बाहिर बाहिर छोडियो भने यो क्षति हुन सक्छ।
पीएलए- पोल्याक्टिक एसिड बायोडिग्रेडेबल (बीजबाट बनेको छ, जस्तै कोर्नस्टार्च), त्यसैले यो अधिक वातावरण अनुकूल छ र बागवानी परियोजनाहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भान्साको भाँडा, जस्तै चश्मा, प्लास्टिक, कटलरी, आदि को रूपमा प्रयोगको लागि मान्य छ। यद्यपि समाप्त एबीएस जत्तिकै सहज छैन, यसमा उत्कृष्ट चमक छ।
HIPSउच्च-प्रभावशाली पोलिस्टीरिन एबीएससँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ, यद्यपि यो अघिल्लो जस्तो सामान्य छैन।
पीईटी: पोलीथिलीन टेरेफाथालेट खनिज पानी वा सफ्ट ड्रिंक बोतलहरूमा र अन्य खाना प्याकेजि inमा पनि सामान्य छ। यो पारदर्शी र प्रभावहरु लाई राम्रोसँग प्रतिरोधी छ।
ल्याउ- d3: यसले र with्ग (हल्का / गाढा) तापमानको साथ परिवर्तन गर्न सक्दछ, जसले यसलाई केहि अनुप्रयोगहरूमा प्रयोगको लागि धेरै उपयोगिताहरूको संख्या दिन्छ जुन तापमान नियन्त्रण समावेश गर्दछ। यसको गुणहरू PLA सँग मिल्दोजुल्दो छ, यो ठोस छ, र यसको बनावट काठ जस्तै छ, शिरा सहित।
निन्जाफ्लेक्स: थर्माप्लास्टिक ईलास्टोमर (TPE) एकदम क्रान्तिकारी नयाँ सामग्री हो, ठूलो लचिलोपनको साथ। यदि तपाईं टुक्रा टुक्रा बनाउन खोजिरहनु भएको छ भने, यो तपाईं खोजिरहनु भएको कुरा हो।
नायलन: यो एक धेरै लोकप्रिय (गैर-पोलीमर) सामग्री, कपडाको लागि फाइबरको एक प्रकार हो जुन कपडा, डोरी, र अन्य धेरै वस्तुहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यो नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन, त्यसैले टुक्रा को विवरण राम्रो छैन, यो पनि चिसो लिन्छ। यसको पक्षमा यसको तापक्रम र तनावको ठूलो प्रतिरोध छ।
त्यहाँ धेरै भिन्न रंगका साथ यी सामग्रीहरूका धेरै रिलहरू छन् ताकि तपाईं सबैभन्दा धेरै मन पराउनुहुनेलाई छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, त्यहाँ बहुरंगी छन्। यदि तपाईं पेन्ट फिनिशको साथ टुक्रा समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, र as त्यति महत्त्वपूर्ण हुनेछैन। त्यहाँ पनि छन्, मैले टिप्पणी गरे झैं तापमानको साथ परिवर्तन भयो, र त्यहाँ फास्फोरसेंटहरू पनि छन् ताकि तिनीहरू अँध्यारोमा चम्किन्छ वा यूभी विकिरणको सम्पर्कमा पर्दा। त्यहाँ सर्किटमा प्रयोग गर्न सकिने ट्र्याकहरू प्रिन्ट गर्न सक्षम हुनको लागि केहि इलेक्ट्रिकल प्रवाहकीय सामग्रीहरू छन्।
थ्रीडी प्रिन्टिंगका प्रकारहरू
सामग्रीको अतिरिक्त, उनीहरूले पनि फरक पार्छन् थ्रीडी प्रिन्टिंगका प्रकारहरू। जस्तो कि जब तपाई एउटा पेपर प्रिन्टर छनौट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यदि तपाई ईंकजेट प्रिन्टर, वा लेजर, एलईडी इत्यादि चाहानुहुन्छ, जब तपाईले थ्रीडी प्रिन्टर छान्नुहुन्छ तपाईले प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजीमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ, किनकि यो निर्भर हुन्छ। प्रदर्शन र परिणाम:
FDM (फ्यूज जमाव मोडलि Model) वा FFF (फ्यूज्ड फिलामेन्ट निर्माण): यो बहुलकको पिघलाउने बयान मोडेलिंगको एक प्रकार हो। फिलामेन्ट तताइएको छ र बहिर्गमनको लागि पिघलिएको छ। हेड एक्स, वाई संग सार्नेछ प्रिन्ट फाइलमा जानकारी अनुसार वस्तु पुन: सिर्जना गर्न। यो बनाइएको प्लेटफर्म यस अवस्थामा मोबाइल पनि हो, र यो Z दिशामा लेयर तह तह सिर्जना गर्न सर्नेछ। यस प्रविधिको फाइदाहरू यो हुन् कि यो कुशल र छिटो छ, यद्यपि यो भागका साथ मोडलहरूका लागि उपयुक्त छैन जुन धेरै बढ्दै जान्छ, किनकि यो तलबाट माथि गरिएको छ।
SLAs (स्टेरियोलिथोग्राफी): स्टीरियोलिथोग्राफी एकदम पुरानो प्रणाली हो जसमा एक फोटोजेन्सिटिभ तरल राल प्रयोग गरिन्छ जुन लेजरद्वारा कठोर बनाइन्छ। यसरी अन्तिम तह प्राप्त नगरेसम्म तहहरू कसरी सिर्जना हुन्छन्। यसमा FDM जस्तै समान सीमाहरू छन्, तर यसले धेरै राम्रा सतहहरू र धेरै विवरणहरूको साथ वस्तुहरू प्राप्त गर्दछ।
DLP (डिजिटल प्रकाश प्रसंस्करण)- डिजिटल प्रकाश प्रसंस्करण एक प्रकारको थ्रीडी प्रिन्टि S SLA जस्तै प्रकारको हो, तर यसले प्रकाश कडा तरल फोटोपोलिमरहरू प्रयोग गर्दछ। नतिजा धेरै राम्रा रिजोलुसनहरू र धेरै बलियोसँग वस्तुहरू हुन्।
एसएलएस (सेलेक्टिव लेजर सिन्टरिंग): चयनित लेजर sintering DLP र SLA समान छ, तर तरल पदार्थको सट्टा तिनीहरूले पाउडर प्रयोग गर्दछ। यो नायलॉन, एल्युमिनियम, र यस प्रकारको अन्य सामग्रीका साथ प्रिन्टरहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। लेजरले वस्तुहरू बनाउनको लागि धुलो कणको पालन गर्दछ। तपाईं मोल्ड वा एक्स्ट्रुजेसन प्रयोग गरेर कठिन-सिर्जना गर्न भागहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
SLM (चयनित लेजर मेल्टिंग): यो धेरै उन्नत र महँगो प्रविधि हो, जसमा एसएलएस समान छ। छनौट गरिएको लेजर पिघलने प्रयोग गरिन्छ, र उद्योगमा मुख्यतया धातु पाउडर पिघलने र अंशहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ।
EBM (इलेक्ट्रोन बीम पिघलने): यो टेक्नोलोजी पनि धेरै उन्नत र महँगो छ, औद्योगिक क्षेत्रतर्फ गियर। यसले इलेक्ट्रोन बीम प्रयोग गरेर सामग्रीको फ्यूजन प्रयोग गर्दछ। यसले धातु पाउडर पिघल्न पनि सक्दछ र १००० डिग्री सेन्टिग्रेड सम्मको तापमानमा पुग्न सक्छ। धेरै पूर्ण र उन्नत फारमहरू उत्पन्न गर्न सकिन्छ।
LOM (लेमिनेटेड वस्तु निर्माण): थ्रीडी प्रिन्टिंग को एक प्रकार हो कि लमिनेट निर्माण प्रयोग गर्दछ। कागज, कपडा, धातु वा प्लास्टिकको पाना संरचनाहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यी तहहरू लेजर द्वारा एक चिपकने र काटिएको हो। यो औद्योगिक प्रयोगको लागि हो।
बीज (बाइन्डर Jetting): बाइन्डर इन्जेक्शन पनि औद्योगिक प्रयोग गरीन्छ। पाउडर प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तै केहि अन्य तरिकाहरू। धूलो सामान्यतया प्लास्टर, सिमेन्ट वा अन्य एग्ल्युटिनिinating्ग हुन्छ जुन तहहरूमा सामेल हुन्छन्। धातु, बालुवा वा प्लास्टिक पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
MJ (सामग्री Jetting): सामग्री ईन्जेक्शन गहना उद्योगमा प्रयोग गरिएको थ्रीडी प्रिन्टिंग टेक्नोलोजी हो। यो वर्षौं को लागी प्रयोग भएको छ, र महान गुण हासिल गर्दछ। ठोस टुक्रा सिर्जना गर्न धेरै तहहरू एक अर्काको माथि निर्माण हुन्छन्। टाउकोले फोटोपोलिमरका सयौं साना बुँदाहरू इंजेक्ट गर्दछ र त्यसपछि तिनीहरूलाई अल्ट्राभायोलेट (यूवी) प्रकाशको साथ घनिष्ठ पार्छ।
MSLA (नकाबिएको SLA): यो एक मास्क्ड SLA को एक प्रकार हो, कि यो एक प्रकाश स्रोतको रूपमा एक एलईडी मैट्रिक्स को उपयोग गर्दछ, एक LCD स्क्रीन मार्फत अल्ट्राभायोलेट प्रकाश उत्सर्जन गर्दछ जसले एकल लेयर शीटलाई मास्कको रूपमा देखाउँदछ, त्यसैले नाम। तपाईं धेरै उच्च प्रिन्ट समयहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि प्रत्येक तह LCD द्वारा पूर्ण रूपमा एकैचोटि उजागर भयो, लेजर टिपको साथ क्षेत्रहरू ट्रेस गर्नुको सट्टा।
DMLS (प्रत्यक्ष धातु लेजर Sintering)- एसएलएसमा समान तरिकाले वस्तुहरू उत्पन्न गर्दछ, तर भिन्नता यो छ कि पाउडर पग्लँदैन, तर लेजरसँग तताइएको छ जहाँ आणविक तहमा फ्यूज गर्न सकिन्छ। तनावका कारण, यस टुक्राहरू प्राय: केही हदसम्म कमजोर हुन्छन्, यद्यपि तिनीहरूलाई पछिल्लो थर्मल प्रक्रियाको अधीनमा राख्न सकिन्छ तिनीहरूलाई अधिक प्रतिरोधी बनाउन।
डीओडी (डिमांड ड्रप)ड्रप-ऑन-डिमांड प्रिन्टिंग अर्को प्रकारको थ्रीडी प्रिन्टिंग हो। यसले दुई स्याही जेटहरू प्रयोग गर्दछ, एउटाले निर्माण सामग्रीलाई जम्मा गर्छ र अर्को समर्थनको लागि विघटन योग्य सामग्री। यसले अन्य प्रविधिहरू जस्तै लेयरद्वारा लेयर पनि सिर्जना गर्दछ, तर तिनीहरूले फ्लाई-कटर पनि प्रयोग गर्दछ जुन प्रत्येक लेयर सिर्जना गर्न बिल्ड एरियालाई पोलिश गर्दछ। यसैले पूर्ण रूपमा समतल सतह प्राप्त हुन्छ। तिनीहरू धेरै सटीक वा मोल्डहरू बनाउन उद्योगमा धेरै प्रयोग गरिन्छ।
यी सबै घर प्रयोगको लागि होईन, केहि व्यापार वा औद्योगिक प्रयोगको लागि हो। थप रूपमा, त्यहाँ अन्य नयाँ विधिहरू देखा पर्दै छन् जुन यति लोकप्रिय छैनन्।
थ्रीडी प्रिन्टरहरू, थ्रीडी प्रिन्टिंगको प्रकारको परवाह नगरिकन पनि धेरै नै संख्याहरू हुन्छन् प्राविधिक विशेषताहरु जसले प्रदर्शन निर्धारण गर्दछ। तपाईले जान्नु पर्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण यो हो:
प्रिन्ट गति: प्रिन्टरले भाग प्रिन्टि finish समाप्त गर्ने गतिको साथ प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो मिलिमिटर प्रति सेकेन्ड मापन गरिएको छ। र तिनीहरू mm०mm / s, १mm०mm / s, आदि हुन सक्छन्। यो जति उच्च छ, कम समयले यसलाई समाप्त हुन सक्दछ। दिमागमा राख्नुहोस् कि केहि टुक्राहरू, यदि ती ठूला र जटिल छन् भने, घण्टा लामो हुन सक्छ ...
इंजेक्टर: यो कुञ्जी टुक्रा हो, किनकि यो सामग्री तयार गर्न सामग्री जम्मा गर्ने प्रभारी हुनेछ, यद्यपि सबै प्रकारका थ्रीडी प्रिन्टि oneलाई एक आवश्यक पर्दैन, किनकि तरल र प्रकाशको साथ केही काम गर्दछ। तर प्रायः घरेलुसँग यो हुन्छ, र तिनीहरू निम्न भागहरू मिलेर बनेका छन्:
तातो सल्लाह: सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण अंश हो। यो तापक्रमबाट फिलामेन्ट पग्लनको लागि जिम्मेवार छ। पुगेको तापमान स्वीकृत सामग्रीको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। सक्रिय कूलरको साथ प्रणालीहरू छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
नोजल: टाउको खुल्दै छ, त्यो हो, जहाँ फ्यूज फिलामेन्ट बाहिर आउँछ। त्यहाँ ठूला व्यक्तिहरू छन् उत्तम आसनहरू र गतिका साथ, तर कम रिजोलुसनको साथ (कम विवरणहरू)। सानोहरू ढिलो छन्, तर धेरै विस्तृत रूपमा अत्यन्त विस्तृत जटिल आकारहरू सिर्जना गर्न।
Extruder: तातो टिपको अर्को पक्षको उपकरण। र यो एक हो कि पिघलाइएको सामग्री extruding को आरोप मा। तपाइँ धेरै प्रकारका फेला पार्न सक्नुहुन्छ:
सिधा: तिनीहरूसँग राम्रो नियन्त्रण र कामको सहजता छ। तिनीहरूलाई यती नाम दिइएको छ किनकि तिनीहरूलाई तातो टिपले सिधा खुवाउँछ।
बोडेन: यस अवस्थामा, पग्लिएको फिलामेन्टले तातो टिप र एक्सट्रुडर बीचको निश्चित दूरी तय गर्नेछ। यसले ईन्जेक्टर मेकानिजमलाई हल्का पार्छ, कम्पनहरू कम गर्दछ र यसलाई छिटो सर्न अनुमति दिईन्छ।
न्यानो ओछ्यान: यो सबै प्रिन्टरहरूमा अवस्थित छैन, तर यो समर्थन वा आधार छ जसमा अंश छापिएको छ। यस अंशलाई यो पक्का गर्न गरम गर्न सकिन्छ कि प्रिन्टि the प्रक्रियाको बखत भागले यसको तापक्रम गुमाउँदैन, राम्रो नतीजाहरू प्राप्त गर्दै। नायलॉन, Hips, वा ABS जस्ता सामग्रीका लागि यो आवश्यक छ। अन्यथा, प्रत्येक तह अर्कोसँग राम्रोसँग टाँसिदैन। PET, PLA, PTU, आदि का लागि प्रिन्टरहरूलाई तातो खाटको आवाश्यक पर्दैन, र चिसो आधार प्रयोग गर्नुहोस्।
भेंटिलेडर- उच्च तापक्रमको कारण, प्रिन्टरहरूमा अक्सर प्रशंसकहरू हुन्छन् प्रणालीमा चिसो राख्न। यो प्रिन्टरको विश्वसनीयता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
STL: को रूप मा तपाईं को विषय मा देख्न सक्नुहुनेछ मुद्रण सफ्टवेयर, धेरै प्रिन्टरहरू मानक STL ढाँचा स्वीकार गरेका छन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको प्रिन्टरले यी फाइल स्वरूपहरू स्वीकार गर्दछ।
Soporteयद्यपि सबै भन्दा लोकप्रिय प्रिन्टरहरू Windows, macOS र GNU / Linux संग उपयुक्त छन्, तपाईंले आफ्नो प्रणालीको लागि त्यहाँ ड्राइभरहरू छन् कि छैनन् भनेर विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।
अतिरिक्तकेही प्रिन्टरहरूले केही अन्य सुविधाहरू पनि समावेश गर्दछ जुन चाखलाग्दो हुन सक्छ, जस्तै प्रक्रियाको बारेमा जानकारीको साथ LCD स्क्रीनहरू, तिनीहरूलाई नेटवर्कमा जडान गर्न वाइफाइ कनेक्टिभिटी, प्रिन्टि process प्रक्रिया फिल्म गर्न सक्षम हुन निर्मित क्यामेरा, आदि।
एकत्रित बनाम विस्थापित: धेरै प्रिन्टरहरू अनप्याक गर्न र प्रयोग गर्नका लागि तयार छन् (अधिक अनुभवहीनताको लागि), तर यदि तपाईंलाई DIY मनपर्दछ, तपाईं केहि सस्ता डिजाइनहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईं किटको प्रयोग गरेर टुक्रा गरेर टुक्रा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » थ्रीडी प्रिन्टिंगका प्रकारहरू: यस प्रविधिको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा
प्रतिक्रियाशील उर्जा के हो? तपाइँ सबै जान्नु आवश्यक छ